Paska : Miorina amin'ny inona ny maha Kristiana anao
Androm-pandresena lehibe ho antsika zanak'Andriamanitra ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.
Io no fototra lehibe ijoroan'ny fivavahana kristiana. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia ho mitovy amin'ny fivavahana finoanoam-poana rehetra ihany ny finoana arahantsika. Hoy Paoly : "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay, ary foana koa ny finoanareo" 1 Korintiana. 15 : 14.
Raha ny finoana ny fitsanganany tamin'ny maty fotsiny anefa dia tsy ampy hampiorina ny finoana an'Andriamanitra. Raha izany dia mijanona ho fanekem-pinoana fotsiny ihany, dia tahaka ny trano tsy misy fototra fa naorina teo ambony fasika. Ary raha avy ny tafiotra toy ny fanenjehana, ny fakam-panahy, ny fahelan'ny fotoana, ny fangatsiaham-po dia indro miverina miaina tsy toy ny Kristiana intsony fa manahaka indray ny fanaon'izao tontolo izao. Ireny no lazaintsika hoe : Kristiana anarany fotsiny.
Mila mahatsapa ny fahaveloman'i Kristy ao anatintsika isika amin'ny fiainantsika andavanandro eny. Ohatra : Ny hanafaka amin'ny ota sy hanavotra antsika ho afaka amin'ny fahafatesam-panahy vokatry ny fahotantsika no antony lehibe niaretan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana. Noho izany, ny olona mino ny fitsanganany tamin'ny maty dia tokony hahatsapa fahafahana tanteraka amin'ny ota ary miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha izany dia hita fa nanao fanovana taminao tokoa ny asa famonjena nataony teo amin'ny hazofijaliana ary voaporofo amin'ny fiovam-po kosa ny fahavelomany ao anatinao. "ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo; ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo" 1 Korintiana. 15 : 17.
Izay fahatsapana velona anananao izay no ahafahanao mijoro vavolombelona amin'ny hafa fa miorina eo ambony vato fehizoro lehibe ny finoanao. Ary ny herin'Andriamanitra nanao asa fanovana tao anatinao dia hitondra fandresen-dahatra ny namanao hamonjena azy kosa indray.
Vakio ny Oha. 24 : 11, 12 : "Raha mihirim-belona tsy hana­faka izay entina hovonoina ianao, sy ireo efa ho mby eo am-pamo­noana ; Raha hoy ianao : "Indro, tsy mahalala izany izahay, moa Izay mandanja ny fo tsy hihevitra izany va ? Ary izay mandinika ny fanahinao, tsy hahalala izany va ? Tsy hovaliana araka ny ataony avy va ny olona rehetra ?". Fitsarana manao ahoana re izany ! Iza no hamaky izany ka tsy ho voatsindrona ?
Raha misy olona tandindomin' ny fahafatesana, nefa isika mandà tsy hampitandrina azy, antsika ny tsiny ! Mety hilaza ho tsy mahalala isika. Mety hilaza isika fa tsy fantatsika izany. Tsy hanampy antsika na amin' inona na amin' inona anefa izany. Azontsika atao ny mahafantatra. Azontsika atao ny mamantatra izay ilaina. Ny fialan-tsiny toa izany tsy heken' Andriamanitra. Nibaiko antsika Izy mba hanopy ny masontsika ka hijery fa efa masaka hojinjaina ny eny an-tsaha. Tokony hampaneno ny fanai­rana isika ! Tokony hilaza aminy ny loza miandry azy... Raha tsy izany, ho meloka ny amin' ny fahafatesany isika.
Izany no takian' izao ora izao. Hanome antsika fahitana anie Andriamanitra, ndrao ho ringana ny olona ka ho tompon' andraiki­tra isika !
Mandrakariva, ny vavaka, indrindra ho an’ny Mpanompon’Andriamanitra, dia tonga atao ambanin-javatra na tena tsy dia ankasitrahana loatra. Misy fotoana hahenoantsiika fanakianana mihitsy ny fampiharana azy, ohatra ny hoe fandrebirebena na mampihen-danja ny asa fanompoana ny fanaovana azy raha toa ka izy no zava-dehibe indrindra ilain’Andriamanitra. Koa sakanana ny fanaovana ny vavaka mba hanehoana ny tena hoe mahomby. Azo antoka noho izany fa miseho avokoa ny avonavona, ny diploma sy izay momba azy ; nefa raha tena mila ireo zavatra ireo ny asan’Andriamanitra dia tena fandaniana andro ihany koa izany izy.
Ny asan’Andriamanitra dia tahaka ny sambo ho rendrika, lavitra izay mety ho famonjena rehetra. Ho an’ny Mpanompon’i Kristy, ny vavaka dia tsy adidy tsotra atao amin’ny asa fanompoany, tsy tombontsoa fotsiny izy, fa ny tena ilaina indrindra. Koa aleony tsy misy rivotra hahavelona ny avokavony toy izay tsy misy vavaka. Koa amin’io Mpanompon’Andriamanitra io ny vavaka no miantoka ny hahafaty na hahavelona azy. Ary izany no tokony hivavahana ho an’ny Mpanompon’Andriamanitra. Ireo zavatra roa loha ireo dia miray amin’ny mariazy izay tsy tokony hisaraka mihitsy : Ny mpitory teny dia tsy maintsy mivavaka, isika dia tsy maintsy mivavaka ho an’ny mpitory teny.
Mba hanampiana feno ilay andraikitra, ary hanosika ho amin’ny fahombiazana io asa lehibe io dia mila vavaka be dia be avy amin’ny tompon’andraikitra rehetra ao am-piangonana dia ireo rehetra heverina ho tokony hanao izany.
Koa ho an’ny tena Mpanompon’Andriamanitra, raha vantany vao nanolo-tena hiray amin’ny Mpamonjy Velona izy ka niditra hitaiza ny fanahiny ho volavolaina amin’ny fanompoana, dia mila mivavaka sy fanampiana be dia be amin’ny fifonana am-bavaka avy amin’ny olon’Andriamanitra.